125 Zavatra tokony hatao rehefa mankaleo ianao: Ny lisitra farany! - Blog
125 Zavatra tokony hatao rehefa mankaleo ianao: Ny lisitra farany!
Mila zavatra hatao ianao.
Saingy tsy misy zavatra manintona manokana tonga ao an-tsaiko.
Inona ary no tokony hataonao?
Soa ihany ho anao, natambatra ity lisitry ny zavatra azonao atao ity rehefa tonga ny hakamoana.
Zavatra mahafinaritra 25 hatao rehefa mankaleo ianao
1. Milalao kilalao karatra - eny, misy ny sasany azonao lalaovina samirery, fa ny lalao tsara indrindra dia ho an'ny mpilalao marobe. Iray amin'ireo tianay indrindra ny filoha - ireto ny lalàna .
2. Milalaova lalao amin'ny solaitrabe - an'arivony no azo isafidianana ary ny ankamaroany dia hanome fahafaham-po sy fihomehezana.
3. Milalaova lalao amin'ny solosaina - na irery na miaraka amin'ny namana, dia afaka mankafy ny fanambin'ny iray amin'ireo lalao tsy tambo isaina amin'ny console na PC ianao.
4. Milalao fanatanjahan-tena - be loatra ny lisitra, nefa maninona raha miloka tenisy, basikety, golf, na izay tianao.
5. Mijery sarimihetsika - mety ho tianao taloha izy io na zavatra mbola tsy hitanao taloha (jereo ny lisitry ny sarimihetsika mampieritreritra anao ).
6. Miketroha andiany iray - tsy misy farany ny andiany lehibe atolotra amin'ny alàlan'ny serivisy fahitalavitra sy streaming. Raiso ny duvetanao ary mahazoa aina eo ambony sezalà.
7. Jereo ny horonantsary YouTube mampihomehy - manomboka amin'ny saka adala sy ny zaza mahafatifaty ka hatramin'ny tsy fahombiazan'ny celeb ary zavatra hafahafa tratran'ny fakantsary, ho LOLing mandritra ny ora maro ianao.
8. Mihirà miaraka amin'ireo gadona ankafizinao - na mpanjakavavy karaoke ianao na moana marenina, tsy maninona na mampitsiky anao izany.
9. Milalaova amin'ny biby fiompinao - saka, alika, hamster, boloky… tsy maninona izay izy ireo, afaka manana fahafinaretana be dia be ianao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olona tsy hooman tianao.
10. Andramo ny taovolo vaovao - raiso ny borosinao, famafazana volo, fanamainana volo, gel, clip sns ... ary zahao raha misy fomba vaovao mety aminao.
11. Manidina papango - avelao ny rivotra ho sakaizanao rehefa manidina ianao, na dia miorina mafy amin'ny tany aza ny tongotrao.
12. Tsidiho ny arcade - raha mbola misy eo akaikinao ny olona iray dia very amin'ny nostalgia milalao lalao taloha ary mandehana amin'ny milina farany.
13. Mihaza matoatoa vitsivitsy - mikaroha toerana sasany manenjika eo akaiky eo ary manaova fotoana mahatsiravina hitsidihana azy ireo.
14. Mianara fika amin'ny majika - manaitra ny namanao amin'ny alàlan'ny fifehezana tetika iray hahafahan'izy ireo maminavina ny fomba nanaovanao azy.
15. Mandehana mihodina - mandraisa kodiarana 8 misy skate na blades dia jereo hoe aiza no itondran'ny toe-tsaina anao.
16. Mandehana mitsangatsangana - mahereza, misosoa amin'ny fiara, dia jereo ny lalana alehanao.
17. Mandehana mitsangatsangana - amboary ny sakafonao ankafizinao rehetra, raiso ny sakaizanao ary atsofohy ny valan-javaboary eo an-toerana.
18. Mandehana bowling - efa nahita olona tsy mankafy bowling ve ianao? Na izaho koa aza.
19. Manaova ady amin'ny rano - raha tsara ny toetr'andro, makà balaonina anaty rano, poleta, fantsom-pantsoka, akanjo fitondra milomano ary mivoadia!
20. Mamorona lisitra playlist - araraoty tsara ny feon-kira sasany izay mifanaraka tsara amin'ny lohahevitra iray. Toy ny mixtape io, tsara ihany.
21. Manaova slip ‘n slide - avy eo atsipazo hatrany hatrany ny tenanao.
22. Manaova lisitra fanomezana - mijery zavatra an-tserasera ary manaova lisitra faniriana entana tianao ho azo amin'ny Krismasy na tsingerintaona nahaterahanao.
23. Play Twister - tsy dia antitra loatra ianao hilalao kilalao kilalao miaraka amin'ny namanao.
24. Mizaha AskReddit - mahazo fanontaniana mangatsiaka sy valiny hafahafa ianao, saingy mampiala voly.
25. Daydream - ary tsy midika fotsiny hoe manongilana ny olanao izahay. Avelao hirehitra ny sainao. Izay rehetra azo atao.
Zavatra mamorona 30 hatao rehefa mankaleo
1. Origami - am-pahatsorana, manahirana izany, fa mahafinaritra, ary afaka manao zavatra mahatalanjona sasany fotsiny ianao amin'ny taratasy aforitra.
2. Môtô zavatra - seza taloha, vinyl vitsivitsy, izay akanjo tsy anaovanao intsony… mifoka rivotra ao anatiny indray.
3. Mofomamy mahandro - ny cookies, ny mofomamy, ny mofomamy ary ny mofo dia sasany amin'ireo sakafo matsiro azonao atao sy ankafizinao (hevitra tsara foana ny miaraka amin'ny namana).
4. Manaova ivon'ny latabatra voninkazo - makà sombin-voninkazo sy voninkazo mivelatra ary alaharo ao anaty fampisehoana mahavariana izy io mba handeha eo amin'ny latabatra fisakafoanao. (Zahao ity tutorial video ity -> Fomba fanamboarana voninkazo ravinkazo )
5. Manomboha zaridaina ahitra boaty - tsy mila maintso maintso na manana zaridaina maniry sy mankafy anana vaovao.
6. Manaova cocktail - andramo amin'ny mixology ny tananao amin'ny fampifangaroana fanahy sy mixer isan-karazany mba hamoronana zavatra matsiro (indray, tsara indrindra zaraina amin'ny namana).
famantarana manafina ny fahatsapany ho anao izy
7. Manaova firavaka - mora kokoa noho ny eritreritrao ny mahita vatsy sy mamorona fehin-tànana sy rojo anao manokana.
8. Mamorona tabilao fahitana - kolontsaina sary sy teny amin'ny ankapobeny izay mampiseho ny tanjonao sy ny nofinao amin'ny fiainana.
9. Manaova savony anao - eny, zavatra azonao atao ao an-dakozia sy ankafizinao ao amin'ny trano fidiovana izany. Ireto misy torolalana vitsivitsy.
10. Manaova sary - mety ho fiainana milamina, sary miavaka, na zavatra avy amin'ny eritreritrao apetrakao amin'ny taratasy izany. Heck, azonao atao aza ny manadino zavatra tsy ampoizina fotsiny.
11. Mandoko zavatra - avoahy ny watercolors, acrylics, na menaka ary apetaho amin'ny canvas / taratasy.
12. Knit - Ny knit dia miverina amin'ny fotoana be ary mety ho fomba miala sasatra amin'ny tolakandro. Tsy dia sarotra araka ny fijeriny azy ary azo ianarana haingana.
13. Crochet - somary mitovy amin'ny fanjairana, tsy mitovy ihany. Fomba mahafinaritra iray hafa hitazomana ny tananao ho be atao.
14. Manjaitra - miaraka amin'ny lamba sy kofehy, azonao atao ny manao akanjo, haingon-trano, eny fa na dia stockings noely aza raha tianao.
15. Haingo ny efitrano iray - volavolaina amin'ny tabilao loko sy santionan'ny lamba ny efitranonao mety ary avy eo tanteraho.
16. Makà sary - an'ny olona, ​​toerana, vorona, biby, zaran-tany, tranobe… izay mahasarika ny masonao.
17. Manaova / manangona maodely - azonao atao ny mividy sy manamboatra modely amin'ny antsipirihany amin'ny karazan-javatra rehetra, manomboka amin'ny sambo ka hatrany amin'ny sary mihetsika sarimihetsika.
18. Manamboara Lego - na manaraka torolàlana ianao na mamorona zavatra avy amin'ny eritreritrao, dia afaka mandany ora maro hananganana zavatra ianao.
19. Manorata tononkalo / tantara - avelao hirenireny ny eritreritrao ary apetraho amin'ny taratasy ny teny vitsivitsy.
roapolo. Manorata taratasim-pitiavana - na dia tsy manana namana aza ianao dia manorata iray amin'ny namanao akaiky indrindra na reninao.
21. Manamboara labiera anao - misy kitapo be dia be azonao vidiana, na azonao atao ny manandrana manao izany amin'ny tenanao.
22. Manaova karatra firariana - ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, krismasy, paska, fetin'ny reny, na fankalazana inona no ho avy manaraka.
23. Mianara kaligrafia - ny fahaizana manoratra tsara tarehy dia ho mora ampiasaina amin'ny fomba rehetra. (Mamporisika mafy izahay ity fampianarana an-tserasera ity !)
24. Manaova mozika - makà fitaovana iray raha manana ianao, na manoratra tononkira fotsiny dia mihira azy.
25. Manaova fandokoana - tsy ho an'ny ankizy intsony, afaka mahazo boky fandokoana olon-dehibe miaraka amina endrika mahavariana ianao izao.
26. Manaova labozia misy fofona - miaraka amin'ny fofona kely, ny fofona ary ny fametrahana azy dia afaka manana labozia ao an-tranonao ianao. Jereo eto raha hahazo aingam-panahy.
27. Manaova lamba firakotra patchwork - manjaitra efamira lamba be dia be mba hanatsarana zavatra tsara ampidinina mandritra ny taranaka maro.
28. Mamorona boky firaketana - Tehirizo amin'ny toerana iray ny fitadidianao sy ireo fitehirizana manan-danja ary ampio izany isaky ny mankaleo ianao.
29. Manomboha tetikasa hazo - manomboka amin'ny boaty tsotra ka hatramin'ny fanaka an-jaridaina dia afaka manamboatra betsaka amin'ny hazo, lakaoly, visy, fantsika ary tsofa ianao.
30. Manaova zavatra amin'ny papier-mache - ankafizin'ny asa tanana amin'ny fahazazana izy io, saingy tsy misy antony tokony hahafahanao miala voly amin'ny taratasy sy apetaka rehefa olon-dehibe.
Zavatra 28 tokony hatao rehefa any an-trano irery ianao ary reraky ny sainao
Maninona ianao no mahatsiaro ho reraky ny fiainana (+ Inona no hatao amin'izany)
Ahoana ny fomba hanamorana ny fotoana haingana kokoa (any am-piasana na amin'ny fotoana rehetra)
Zavatra mahafinaritra 16 hatao amin'ny namanao akaiky indrindra
Ny zavatra tsotra eo amin'ny fiainana: lisitry ny fahafinaretana kely 50
Zavatra mahafinaritra tokony hatao 15 rehefa mankaleo ianao
1. Ajanony ny sarimiaina - eny, amin'ny findainao sy amin'ny app anao fotsiny ary amin'ny zavatra manodidina ny tranonao no ahafahanao mamorona horonan-tsary mihetsika tsara.
2. Mandevina kapsily ora - makà sambo tsy misy rano sy tsy harafesina, fenoy zavatra manokana azy, ary aleveno any ho any mba hahafahanao mihady azy ao anatin'ny 10 taona na mihoatra (na avela ho hitan'ny olon-kafa).
3. Manaova sy manidina fiaramanidina taratasy - mifaninana amin'ireo namanao amin'ny sidina lavitra indrindra sy ny aerobatika tsara indrindra.
4. Manaova go go kart - mila hazo, kodiarana ary zavatra hafa ianao, saingy azonao atao ny mihazakazaka rehefa vita!
5. Fiara voafehy lavitra - na eo amin'ny zaridainam-pokontany misy anao na amin'ny làlana mahitsy dia miakara amin'ireo namanao mba hahitana hoe iza no hiampita ny tsipika fahatongavana aloha.
6. Manaova sarimihetsika - ianao sy ny namanao dia mety ho kintana rehefa mahita tantara, propa ary akanjo ianao.
7. Jereo ny kintana - raha heverina fa maizina dia mivoaha any ivelany ary atodiho ambony ny masonao (mety ho fanampian'ny teleskaopy) ary gaga ianao manontany an'izao rehetra izao.
8. Ianaro ny gitara - izy io no fitaovana milay indrindra, tsy holazainao?
9. Mianara manao juggle - ny baolina juggling mety dia miasa tsara indrindra, fa azonao atao ny manetsiketsika zavatra mety ho azon'ny tananao atao (tandremo fotsiny fa tsy vaky).
10. Miezaha mamaky firaketana an'izao tontolo izao - tsy ho ofisialy izany raha manao izany ianao, fa fomba tsara hanoherana ny tenanao amin'ny karazan-javatra hafahafa sy mahafinaritra rehetra.
ny sipako tsy te hanambady
11. Manaova biby balaonina - mila karazana balloons mety ianao, saingy zavatra azonao atao ny manaitaitra ny hafa raha vao mahafehy izany ianao.
12. Mianara beatbox - manaova fanazaran-tena amin'ny famolavolana tabataba amin'ny vavanao.
13. Midira amin'ny ligin'ny fanatanjahantena nofinofy - misy ligy an-tserasera be dia be ho an'ny fanatanjahantena lehibe rehetra.
14. Manomboha bilaogy - mety amin'ny zavatra hitanao fa mahaliana anao izany. Mety hahazoanao denaria vitsivitsy koa io.
15. Manangana afo - aza hadino ny manao azy soa aman-tsara ary na aiza na aiza avelany.
Zavatra mahaliana 15 tokony hatao rehefa mankaleo
1. Fikarohana ny razamben'ny fianakavianao - azonao atao izany amin'ny Internet sy amin'ny fitsidihana ny tranombokim-panjakana eo an-toerana na tranom-panjakana misy anao mitahiry firaketana.
2. Mianara fiteny iray - ary tsy voatery ho iray miteny ianao vao afaka mianatra tenin'ny tanana.
3. Manaova piozila - fanamby ny sainao manam-pahaizana amin'ny fanoherana ary jereo raha afaka mamita ilay takelaka ianao.
4. Manaova fanadinana an-tserasera - be dia be ny lohahevitra hizaha toetra ny tsy fahalalanao.
5. Manomboha fanangonana - na inona na inona mety amin'ny fanirianao. Vola, karatra paositra, fitoeran'ny labiera, Zaza Beanie.
6. fihazana vidy - tsidiho ireo fivarotana mitahiry vola sy tsena fivarotana hijerena raha mahita zavatra sarobidy mandeha mora ianao. Azonao atao ny mitazona azy ireo na mivarotra azy ireo hahazoana tombony.
7. Mijery ny olona - mitadiava toerana misy olona marobe ary avy eo mijery sy manontany tena hoe iza izy ireo ary inona no mitranga amin'ny fiainany.
8. Mandehana amin'ny lahateny ho an'ny daholobe - be dia be no atao isan'andro amin'ny herinandro any amin'ny tanàna lehibe, ary ho hitanao any amin'ny tanàna kely kokoa sy vohitra kely koa izy ireo. Mirakitra lohahevitra isan-karazany izy ireo.
9. Mamorona zavatra - misy zavatra irinao hanananao ve tsy misy? Mamorona izany. Iza no mahalala, mety hahazo vola be ianao amin'izany.
10. Manaova fitsangatsanganana mozea virtoaly - Maro ny tranombakoka lehibe izao mamela anao hitsidika azy ireo avy amin'ny fiononan'ny tranonao manokana amin'ny fitsidihany virtoaly.
11. Manaova resaka amin'ny olon-tsy fantatra - tsy fantatrao mihitsy izay tantara mety henonao. Azonao atao ny mipetraka eo akaikin'ny Forest Gump.
12. Jereo ny fanadihadiana - ianaro zava-baovao momba ny lohahevitra iray tianao. Ny resaka TED dia manentana ny saina ihany koa.
13. Manaova fampianarana an-tserasera - misy fampianarana ho an'ny ara-bakiteny izay azonao eritreretina… ary betsaka ho an'ny zavatra tsy hainao!
14. Mametraha tanjona sasantsasany - eritrereto ny zavatra 3 tianao hahatratrarana iray amin'ny herinandro ho avy, ny iray amin'ny volana manaraka, ary ny iray amin'ny taona manaraka.
15. Atombohy kankana - avelao ireo zavaboary marefo ireo hikarakara ny sombin-tsakafoo rehetra. Fandresena fandresena ho an'izay rehetra tafiditra amin'izany.
Zavatra mavitrika 15 tokony hatao rehefa mankaleo ianao
1. Mandehana geocaching - mihaza harena. Ok, tsy harena, fa mbola mila mandeha amin'ny toerana ianao ary mitady zavatra ary hitondra anao amin'ny traikefa nahafinaritra.
2. Mandehana manao beachcombing - eny, harena tena izy amin'ity indray mitoraka ity. Harena piraty, angamba. Mety tsy izany, fa afaka mahita zavatra mahaliana sasana amin'ny morontsiraka ianao.
3. Mandehandeha - tsia, matotra, mivoaha amin'ny trano ary apetraho eo alohan'ilay iray ny tongotra iray. Mahagaga ny vatanao sy ny sainao.
4. Mandehana fitsangatsanganana an-tongotra - ataovy mahaliana kokoa ny mandeha amin'ny alàlan'ny fitantarana ny tantaran'ny tanàna na tanàna iray.
5. Mandehana mankany amin'ny zaridainanao - mihady, manapaka, manapaka, mamafy, manety, manala ahi-dratsy, mamboly, sy maro hafa.
6. Mandehana mijery vorona - mitsikilo ireo namantsika volom-borona amin'ny alàlan'ny fizahana amin'ny natiora ary mitady karazana maro araka izay tratranao.
7. Forage - na ho an'ny voankazo, legioma, na zavatra hafa azo hanina, tandremo fotsiny sao mifidy zavatra izay efa hitanao fa azo antoka.
8. Fiofanana amin'ny fizaran-tany - fomba iray tsara hampiasana vondrona hozatra maro karazana indray mandeha.
9. Mandehana mitsimpona fako - diovy ny manodidina anao ary arovy ny bibidia monina ao amin'ny fanesorana ireo fako.
10. Mpirotsaka an-tsitrapo - Atokanao ho an'ireo tsy dia mahantra na amin'ny antony itadiavanao vola.
11. Mandehana mihaza - jereo hoe karazana karazana karazan-javamaniry hafahafa afaka hitanao ao amin'ny zaridainanao na ny valan-javaboahary eo an-toerana
12. Mandihiza amin'ny feon-kira tianao indrindra - asio mozika mampihetsi-po vitsivitsy ary ataovy izay hahamety ny tranonao.
13. Mandehana any amin'ny gym - mety hampiasa an'ity indray mitoraka ity ianao mba hanalana ilay fivoriana fanazaran-tena.
14. Mandehana mitaingina bisikileta - mamely ny arabe na ny ambanivohitra amin'ny kodiarana roa ary mahatsapa ny rivotra eo amin'ny tavanao rehefa mizaha toerana vaovao ianao.
15. Mandehana milomano - tsidiho ny pisininao eo an-toerana ary asio halavirana. Fanatanjahan-tena tsara amin'ny vatana rehetra izay mora amin'ny tonon-taolana.
Zavatra azo ampiharina 15 rehefa mankaleo
1. Arindrao ny talantalam-bokinao - azonao atao amin'ny abidia, amin'ny karazany, amin'ny mpanoratra, na koa amin'ny lokon'ny hazondamosin'ny boky.
2. Declutter - Azo antoka fa manana zavatra betsaka noho izay ilainao ianao. Maninona raha esorina ny sasany aminy? Omeo izany ho an'ny fiantrana na amidio ireo entana sarobidy indrindra.
3. Feng Shui ny tranonao - alao antoka fa manaraka ny fitsipiky ny fomba fanao sinoa taloha ny efitranonao.
4. Miomana amin'ny Hara-magedona - na, farafaharatsiny mba hanomanana anao sy ny ankohonanao amin'ny ratsy indrindra amin'ny alàlan'ny famonosana kitapo fakana aina.
5. Sasao ny biby fiompinao - mila karakaraina ireo mpiara-mitory amintsika, ka maninona raha atao izany rehefa mankaleo ianao?
ahoana no ilazanao amin'ny olon-tianao fa tianao izy
6. pickling / canning - amboary ny tahirinao ho an'ny sakafo voaomana rehefa mila zavatra amin'ny vanim-potoanan'ny fitomboany ianao.
7. Omano mandritra ny 7 andro ny sakafonao - amin'izany fomba izany dia tsy mila miady saina amin'ny zavatra handrahoana ianao any aoriana (ary afaka mividy ireo akora ilaina ianao).
8. Foano ny boaty fampidiranao - raiso ny mailaka tsirairay ary esory izany na tahirizo ao anaty fampirimana misaraka. Dia mipetraha ary mankafy ny fahabangana.
9. Manaova lisitra siny - sorohy ny sorisory amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny lisitra ireo zavatra tena tianao hatao amin'ny fiainana (mba hahafahanao manomana sy manao azy!)
10. Sasao ny fiaranao - marin-toetra, mitady somary maditra izy ary mety atao amin'ny madio.
11. Ataovy ny enti-mody - ny fanaovana azy rehefa mankaleo ianao dia midika fa tsy mila atao rehefa tsy.
12. Soraty ny sitraponao - tsy misy olona te hieritreritra momba ny fahafatesana, fa tsara ny manana karazana drafitra napetraka ho an'ny ratsy indrindra.
13. Mitadiava fifampiraharahana tsara kokoa - na ho an'ny enti-miasao, ny fonosanao amin'ny fahitalavitra, na ny fiantohana anao, dia azo antoka fa afaka nanangona vola ianao tamin'ny fanovana.
14. Omano ny dianao fisakafoanana manaraka - mijery menus, mamaky hevitra ary manapa-kevitra amin'izay alehanao manaraka. Tamin'izany no nandaminanao azy mialoha.
15. Manome toerana malalaka amin'ny telefaonao - hamafa izay sary izay tsy dia mila tazominao intsony ary esory izay fampiharana tsy ampiasainao intsony.
Zavatra mora 10 azonao atao rehefa mankaleo ianao
1. Mamaky boky - mora tokoa ny manamaivana ny fahosanao amin'ny alàlan'ny fanodinana tena amin'ny tantara tsara.
2. Misaintsaina - fotoana mety indrindra hampiharana fisaintsainana ary azonao atao izany na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra.
3. Mihainoa podcast iray - misy seho isaky ny mahaliana rehetra ary malalaka izy ireo matetika.
4. Jereo ny sary taloha - raiso ny nostalgika rehetra ary ampahatsiarovy amin'ny namana na fianakaviana momba ny taloha.
5. Makà torimaso - mandeha tokoa ny fotoana rehefa matory ianao. Mialà sasatra ary mamerena bateria.
6. Ahinjiro - hahatsapa ho tsara kokoa ianao rehefa avy namelatra ny hozatra rehetra amin'ny vatanao.
7. Mandroa - fomba iray hafa hialana sasatra rehefa leo ianao ary manam-potoana eny am-pelatananao.
8. Manaova jigsaw - tsotra izy io, miasa ilay raharaha volondavenona, fa mampiala sasatra ihany amin'ny fomba hafahafa.
9. Miantso namana - ataovy izay mbola tsy niresahanao elaela. Tsara ny mifanenjika amin'ny fiainan'ny tsirairay.
10. Vakio ny vaovao - tsara ny mijanona ho fampahalalana. Maninona raha andramana ny vaovaonao eo an-toerana mba haharaka hatrany ny zava-mitranga amin'ny faritra misy anao?
rehefa mifidy ny reniny aminao ny vadinao
wcw Tompondaka eran-tany amin'ny hazakazaka mavesatra eran-tany
Ahoana no azonao haingana raiki-pitia amin'ny olona iray
tiffany ny fiainako 600 lb
maninona aho no mahatsapa fa tsy an'ny tena
niantso ahy hoe tsara tarehy tiany aho
rehefa elaela tsy hitanao ny namanao akaiky indrindra